समाचार - उत्कृष्ट २ employees कर्मचारीलाई पुरस्कार २ outstanding जनवरी, २०२१
जनवरी २21, २०२१ मा उत्कृष्ट कर्मचारीहरूका लागि पुरस्कार समारोह
२०२० मा उत्कृष्ट कर्मचारीहरूका लागि पुरस्कार समारोह हिजो दिउँसो परफेक्ट डिस्प्लेमा आयोजित गरिएको थियो। COVID-19 को दोस्रो छालबाट प्रभावित। सबै सहकर्मीहरू १F एफमा रूफटपमा भेला भएका उत्कृष्ट कर्मचारीहरूका लागि वार्षिक पुरस्कार समारोहमा भाग लिन। बैठकको अध्यक्षता प्रशासनिक केन्द्रका चेन फang्गले गर्नुभयो।
उनले भने, असाधारण वर्ष २०२० मा हाम्रा सबै सहकर्मीहरूले कठिनाइहरू पार गरे र सन्तोषजनक उपलब्धिहरू बनाए, जुन हाम्रा सबै सहकर्मीहरूको संयुक्त प्रयासमा पर्दछ। आजका उत्कृष्ट कर्मचारीहरू केवल प्रतिनिधिहरू हुन्। उनीहरूसँग सामान्य विशेषताहरू छन्: तिनीहरू कामलाई आफ्नो मिसनको रूपमा लिन्छन् र उत्कृष्टताको पछि लाग्छन्। सब भन्दा साधारण काममा पनि तिनीहरू आफैलाई उच्च मापदण्डको साथ माग गर्दछन्। तिनीहरू कम्पनीको बारेमा चिन्तित छन्, समर्पित र योगदान गर्न इच्छुक छन्।
चेन फangले औंल्याए: कर्मचारीहरू जसले चुपचाप योगदान दिन्छन् उद्यम विकासको मेरुदण्ड हुन्; नवीनता र विकासको अग्रणी, तिनीहरूले विदेशी बजार खोल्छन्, प्रवृत्ति नेतृत्व, र यो दुनिया भर मा लोकप्रिय बनाउँछ; कडा स struggle्घर्षको नेतृत्व, उनीहरूले प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्छन्, र राजस्व बढाउँछन् र खर्च घटाउँदछन्। यी उत्कृष्ट गुणहरू भएका हाम्रा कर्मचारीहरू द्रुत विकासको लागि केवल चालक शक्तिहरू मध्येका एक मात्र होइन तर व्यवसायीहरू र उद्यम संस्कृतिका उत्तराधिकारीहरू हुन्!
बैठकको अन्त्यमा, अध्यक्ष श्री उनले एक समापन भाषण गरे ：
१. उत्कृष्ट कर्मचारीहरू हाम्रो उत्कृष्ट टोलीका प्रतिनिधि हुन्।
२.२०११ मा बिक्री लक्ष्य र आउटपुट सेट गर्नुहोस्, र कम्पनीले लगभग %०% को वार्षिक वृद्धि दर कायम गर्न जारी राख्नेछ। सबै कर्मचारीहरुलाई कडा परिश्रम गर्न जारी राख्न कल गर्नुहोस्।
Government's. सरकारको आह्वान पछ्याउनुहोस्, नयाँ वर्षको लागि गृहनगर नफर्काउनका लागि अधिवक्ताहरू आवश्यक पर्दछ। कम्पनीले शेन्जेनमा बस्ने सहयोगीहरूलाई yuan०० युआन दिनेछ, र उनीहरूसँग फरक नयाँ वर्ष बिताउँछ।